प्रतिगमन जिन्दावाद ! - NepalDut NepalDut
प्रतिगमन जिन्दावाद !
खडग पाण्डे काठमाडौं पोखरा
माघ २४ गते २०७७
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र रास्ट्रपतिको ल्याप्चेबाट संसद बिघटन पछि देशमा प्रतिगमन भयो भनि नेपालका संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु र नागरिक समाज सडकमा आएका छन्। नेपाली समाज राजनीतिक विभाजन भएको छ। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नम्वरी नेपाली काग्रेसका मुखिया शेरबहादुर देउपा मात्र प्रतिगमन हो वा होईन अझै छुट्याउन सकेका छैनन्। ओलीलाई प्रतिगमनको नाईके र अधिनायकबादी लम्फु जस्ता अनेकौ आरोप लगाउदै कलंकित गरिदै छ। यी सबै आरोपहरु उनको क्षमता र बुद्दिमता बारे खास जानकारी नभएका राजनीतिकरुपमा आल-काचा मान्छेहरुले लगाएका आरोपहरु खारेज गरिनु पर्दछ। उनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ नयाँ प्रयोग गरी संसारै चकित पार्ने काम गरेका छन्। ओली बालाई बेकम्फुस र प्रतिगमनकारीको नाईके भन्नेहरुलाई मेरा प्रश्नहरु को उत्तर दिन सक्नु हुन्छ? सक्नुहुन्छ भने तलका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस
ओलीले हालसम्म चलन-चल्तीमा भएको “बहुमतले अल्पमतलाई” सासन गर्ने पद्दतिलाई उल्ट्याई “अल्पमतले बहुमतलाई” सासन गर्ने पद्दति स्थापनाको नौलो अभ्यास सुरु गर्नु भएको छ। सबै पार्टी कमिटीहरुमा आफु अल्पमत हुदा सर्वमान्य पद्दतिनै फेरवदल गर्ने अर्को कुनै राजनेता कतै देख्नु सुन्नु भएको छ? उहाको यो पद्दतिलाई “धुर्बे हात्ती पथ” कोरुपमा स्थापित गरिनु पर्दछ।
नेपाली राजनीतिमा हुने गरेको “मनोटोनस” पनलाई उहाले कौतुहलता प्रदान गरी रोमाञ्चित गर्नु भएको छ। अब के हुन्छ त्यो कसैले अनुमान गर्न सक्दैन। संविधानको धाराहरु, कानुनका दफाहरू र नियमावलीका बुदाहरु फनफनी नचाईदिने र क्षणभरमै गायव गर्दिने क्षमता र बुद्दिमता कुनै जासुसी उपन्यासको कथा भन्दा कम छ? जनतालाई सधैभरी कौतुहलता र रोमाण्टिक बनाउने ओली बाहेक अरु कोही छ?
पशुपतिमा क्षमा पूजा गरेको र सुनको जलाहरी लगाईदिन केही करोड रकम जनताको रगत पसिनाबाट सकलित कर बाट दिने हुकुम बक्स भएकोमा कतै तिनीहरुको पुर्ख्यौली सम्पति दिन लागे जस्तो गरी बिरोध हुदैछ। उहा आफु त खाटी भौतिकबादी हो र धर्म अफिम हो भन्ने कुरा नबुझी तेसै उफ्रिन्छन । पशुपतिमा गरेको यो सानो सिद्राको ब्यापार मात्र हो। अहिले सम्म राजनीतिको लागि मोदीले जस्तै पिताम्वर धारण गर्नु भएको त छैन नि। अझ खास कुरो देश कोभिड बिरुद्दको खोपको अभावमा कार्यकारी प्रमुखको नाताले जनताको रक्षा गर्ने जिम्मा पशुपतिलाई दिदा पनी किन उछित्तो? आफ्नो एजेण्डा खोसिएकोमा कलम थापाहरुले बिरोध गर्नु त स्वाभाविक हो तर अरुले टाउको किन दुखेको ? अझ हाम्रा प्रधानमन्त्री त पशुपतिले एक्लै सबैको कल्याण गर्न भ्याउनु हुदैन होला भनेर तराईका केही जिल्ला हेर्ने गरी चितवनको ठोरीमा रामको मुर्तिमा प्राण-प्रतिस्ठान गर्न आतुर हुनुहुन्छ। कोमल फुल चुडेर कठोर ढुङ्गा पुज्ने समाजको राजनितीक “क्यास” गर्दा ब्याङ्कनै लुटे जस्तो गर्न पाईन्छ? दलाई लामा, मोदी मात्र होईन हाम्रै राम बहादुर वम्जनले गर्न हुने काम कयुनिष्टले गर्न हुदैन भनेर कुन “संसदीय परम्परा” र “अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बिरुद्द” हो?
के. पी. ओली “समृद्द नेपाल सुखी नेपाली” को भाखा हालेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु भएको हो। सरकारले काम गर्न पाउनु पर्दथ्यो तर काम गर्न दीइयन। काम गर्न कम्ति सकस बनाए। बल्ल बल्ल रेल ल्यायो त्यो पनी त्रिपालले ढाकिदिए, पानि जहाज कार्यालय खोल्यो, कार्यालय सहयोगी अर्कै कर्मचारी समुहको परेछ समयमा कार्यालयको ढोकै खोल्दैन, विकास निर्माण गरौ भन्यो ओम्नी र यतिले टेण्डर्नै नहाली काम चाहियो भन्छन। एउटा नेताले जावो आठ आना जग्गा किन्दा त बिरोध गर्दछन खै यसरि कसरी समृद्द नेपाल सुखी नेपाली बनाउने? जता हेर्यो उतै अबरोध त्यो पनी प्रतिपक्षका मुखियालाई त दुई-चार नियुक्ति फ़ाल्दिए चुप लाग्छन आफ्नै पार्टीका मान्छेहरुले सकस पारे। लौ हेर्नुहोस त काम गर्न सजिलो होस भनि जाबो प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेको कत्रो बवम्डर गरेका? देशको संबिधान, नियम कानुन सबै मानेर पनी साध्ये हुन्छ? अब त पत्याउनु भयो होला नि ओलीलाई काम गर्न कति कठिन रहेछ भनेर।
बर्तमान ओली सरकार आविष्कार र नविनाता ल्याउनेमा नेपालकै सबभन्दा सफल सरकार हो। हेर्नुहोस अरुलाई गाली गर्न, सराप्न र धारेहात लगाउन र टुक्काहरुमा कति धरै शब्दहरु विकास गरेको छ। मार्क्सवादका पट्यारलाग्दा शब्दहरुको सट्टामा कस्ता मिठा, रसीला र हलुङ्गा शब्दहरुको प्रचलन बढाएको छ। जनताहरुमा सोचेर होईन कसरी घोचेर बोल्ने शिप र क्षमताको विकास भएको छ। यी सबै शिप र क्षमता विकासको जस बर्तमान प्रधानमन्त्री बाहेक कसैले दावी गर्न सक्दछ?
प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा उनको सोच क्रियाकलाप बिरुद्द बोल्नेहरु राष्ट्र बिरोधि, जनविरोधी, विकास बिरोधि र संबिधान बिरोधि हुन्। हाम्रा प्रधानमंत्री विकास र मनोरज्नका प्र्याबाचीनै हुनुहुन्छ। उहाको कोटको एकपट्टिको खल्तीमा उद्घाटन गर्न कैची र अर्को पट्टिमा टुक्का राख्नु हुन्छ। सरकारमा रहेर पनी सडकमा भाषण ठोक्नु हुन्छ। मान्छेहरु सरकारमा भएको पार्टीले सरकारी संचार माध्यमबाटै जनतालाई आफ्नो कुरो नराखेर किन सडकमा आएको भनि प्रश्न गर्दछन। वास्तवमा सरकारी संचार माध्यमहरुमा भजन र दोहोरी देखाउनु पर्दछ। रेडियो र टि. भी. बाट प्रसारण गर्दा जनताले च्यालन परिवर्तन गरी हाल्दछन र आफ्नो कुरो सुनाउन पाईदैन। त्यसकारण ओलीले सडक रोजेका हुन्।
हाम्रा ओलीलाई पार्टी भन्दा माथि भए भनेर आरोप लगाउने गर्दछन। हो ओली पार्टी भन्दा माथिनै छन्। बिगतको चुनावमा ओलीकै अनुहार हेरेर जनताले भोट हालेका थिए। ओलीको फोटोमा छाप लगाउदा उनको अनुहार फोहोर होला भनेर चुनाव चिन्ह राखिएको हो। त्यसकारण हामीले पाएको भोट पार्टी सिद्दान्त र चुनावी घोषणा पत्र हेरेर होईन उनको चुच्चे ढाका टोपी लगाएर मुस्मुराएको फोटो मन पराएर आएको भोट हो। पहिलेको चुनावमा त ओलीको जुङ्गा फुलेका थिय अब त फेरी काला-काला भएका छन् त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा हाम्रो दुईतिहाई सिट पक्का छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो प्रसारण सामाग्रीमा पार्टीको झण्डा, नीति र कार्यक्रम भन्दा उनको फोटोहरुको प्रवर्धन गर्दछौ।
ख्याल रहोस अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भए पनि वा न भए पनी यो प्रतिगमनको यात्रा संकटकाल लगाएर होस् वा रास्ट्रपति शासन मार्फत निरन्तर अगाडि बढ्ने छ। अत: माथि उल्लेखित सबै दसी प्रमाण र अनिश्चित भविष्यको लागि प्रतिगमन जिन्दावाद!!!